အကောင်းဆုံး ဂျက်ဆေးဆိုး ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေး ဂျက်ဆေးဆိုး ကိုရှာဖွေရန်။
ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်အထူးပြု ဂျက်ဆေးဆိုးအတွက်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သည့်ထုတ်ကုန်အတွက်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာအတူစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခေါင်းဆောင်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကျမတို့က Taiwan။ ကျွန်တော်တို့သည်သူတို့သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကျွန်တော်တို့၏ဖောက်သည်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ပူဇော်ရမည်။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်တွေကျွမ်းကျင်စွာတစ်ဦးချင်းစီအပလီကေး၏မတူညီကြလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီဖို့ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.dyeing-machine.com/my/jet-dyeing.html
အသိဉာဏ်ပေါ်သယ်ဆောင်မြင့်မားသောဖိအားစဉ်ဆက်မပြတ်အမြန်ဆေးဆိုးစက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်နှင့်အတူမျိုးဆက်သစ်ဆေးဆိုးစက်. တော်လှန်ရေးသမားဆန်းသစ်တီထွင်မှု,ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ. 65 ကျော်ကိုသိမ်းပါ%ရေ,ရေနွေးငွေ့,လျှပ်စစ်ဓာတ်အား,နှင့်အရန်,65 လျှော့ချ%ရေဆိုးနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု၏. အစွန်းရောက်အနိမ့်နှင့် uni-အရက်အချိုး:၁:2.5~3.5 optional ကို devices များအထူးလုပ်ဆောင်ချက်များကို: မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မားသောဖိအားယိုစီးမှု. ရေအေးကိုတိုက်ရိုက်ပြန်လည်အသုံးပြုသည်. မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မားသောဖိအားရေပြင်ဆင်နေ. မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မားသောဖိအားကိုသုတ်ခြင်း. ရေခဲရေနှင့်အပူချိန်မြင့်မားသောအအေး. စုစုပေါင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် Watt မီတာ. စုစုပေါင်းရေနွေးငွေ့သုံးစွဲမှုမှတ်တမ်းတင်ရန်ရေနွေးငွေ့မီတာ.
အကောင်းဆုံး ဂျက်ဆေးဆိုး ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် ဂျက်ဆေးဆိုး ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ ဂျက်ဆေးဆိုး ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
မြင့်မားသောအပူချိန် Rapid ဆိုးဆေးစက် အင်္ဂါရပ်များ အစွန်းရောက်အနိမ့်အရက်အချိုး 1:4~5,ရေကို minimize လုပ်ပါ,ဓာတုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု,စွန့်ပစ်ရေသန့်သန့်ရှင်းရေးကိုလည်းကျဆင်းသွားသည်. ရှည်လျားလွန်းသည့်အထည်များနှင့်ပိတ်ထည်များ၏ဆွဲအားကြောင့်အခန်းတစ်ခုစီတိုင်းအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတင်စွမ်းနိုင်မှု. စတုဂံမတူကွဲပြားဆိုးဆေးပြွန်တပ်ဆင်ထားသည့်အထည်များသည်ဆိုးဆေးပြွန်အတွင်းလည်ပတ်နေစဉ်ချည်ထည်များပြန့်ပွားစေရန်ကူညီပေးသည်၊. အနိမ့်တင်းမာမှုနှင့်ပျော့ nozzle ဖိအား spandex အထည်များ၏ elasticity တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်. မြင့်မားသောလိမ်အထည်များအတွက် detwisting အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပိုကောင်းတဲ့ထိတွေ့ခံစားမှု၎င်း၏အထူး nozzle နှင့်ဆေးဆိုးပြွန်ဆောက်လုပ်ရေးအားဖြင့်တိုးတက်လာသည်. လက်စွဲစာအုပ်နှင့်အလိုအလျောက်ဓာတုဆေးထိုးသည့်စနစ်နှစ်ခုလုံးကိုရနိုင်သည်. အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းသောစနစ်သည်ဆေးသုတ်ခြင်းအပြီးတွင်အကြံပေးအဖွဲ့ကိုလာမည့်အသုတ်၏ပိတ်ထည်များမှကာကွယ်ရန်တပ်ဆင်ထားသည်. အထူးလျှံလန်းလန်းလန်းလန်း့့့့့့့့့ရေ့့့့့့့ရေ့့့့့ရေ့့့့့ရေ့့့့့ရေ့့့့့့ရေ့့့ကိုအနည်းနဲ့အသေး. ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဆောက်လုပ်ရေးသည်လိုအပ်သောနေရာကိုချွေတာသည်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အင်္ဂါရပ်များ အလိုအလျှောက်သန့်ရှင်းရေးစနစ်ဆေးကြောစက်အပြီးတွင် tank ကိုဆေးကြောရန်အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေးစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်. အထူး Overflow သုတ်ခြင်းစနစ်အထူးလျှံလန်းလန်းလန်း့့့့့့့ရေ့့့့့ရေ့့့့့့့့ရေ့့့့့့့့ရေ့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့့ Dgs ့့့မှု့. အလိုအလျောက်ဓာတုပစ္စည်းစနစ်လက်စွဲစာအုပ်နှင့်အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းစနစ်နှစ်ခုလုံးကိုရနိုင်သည်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
မြင့်မားသောအပူချိန် Rapid ဆိုးဆေးစက် အင်္ဂါရပ်များ အလွန်အမင်းနိမ့်အရက်အချိုးအစားအစွန်းရောက်အနိမ့်အရက်အချိုး 1:4~ရေကို minimize လုပ်ဖို့ 5,ဓာတုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု,ထို့အပြင်အလဟ water ဖြစ်သွားသည့်ရေသန့်စင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်. ချကိရိယာဆေးဆိုးပြွန်ရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့ကိရိယာတန်ဆာပလာများတပ်ဆင်ထားသည်,ဆိုးဆေးနှင့်ဆိုးဆေးစွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်ရှောင်ရှားရန်အခန်းများသို့စနစ်တကျကျဆင်းသွားစေရန်သေချာစေရန်. အာကာသလိုအပ်ချက်သိမ်းဆည်းပါပတ်ပတ်လည်ပုံသဏ္constructionာန်ဆောက်လုပ်ရေးလိုအပ်သောအာကာသကယ်တင်နိုင်ပါ. ထည်ဆေးပြားကိုရှောင်ကြဉ်ပါစက်၏အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်တွင်ထည်များမဖောင်းပွစေရန်ရှောင်တိမ်းခြင်းကဲ့သို့သောမှန်များရှိသည်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အင်္ဂါရပ်များ အလွန်နိမ့်အရက်အချိုး 1:4~7,၎င်းသည်ဆိုးဆေးအသုံးပြုမှုကိုလျော့နည်းစေသည်,ဓာတုပစ္စည်း,စွမ်းအင်နှင့်ရေအပြင်စွမ်းအင်သန့်စင်ကုန်ကျစရိတ်. အထူးဆိုးဆေးပြွန်နှင့်ဆေးကြောစဉ်လည်ပတ်နေသည့်အ ၀ တ်အထည်များ၏ nozzle တည်ဆောက်မှုကကူညီသည်.ဤသည်ပိုကောင်းထည်ထိတွေ့ခံစားမှုရရှိ&တွန့အမှတ်အသားများဖယ်ရှားပစ်. ဒါကြောင့်ပျော့ပျောင်းသောစီးဆင်းမှုဆိုးဆေးစနစ်ကထွက်ခွာသောအခါထည်ဆိုးဆေးပြွန်ထဲမှာဖြန့်သည်&မည်သည့်ယန္တရားမျှချွတ်ယွင်းခြင်းမရှိဘဲဆေးဆိုးခန်းထဲသို့ချောချောမွေ့မွေ့ပြန်လည်ကျဆင်းသည်. အခန်းတစ်ခုစီအတွက်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောဝန်စွမ်းရည်သည်အခန်းတစ်ခုစီတွင်ရှည်လျားသောထည်အရှည်ကိုကာကွယ်ပေးသည်,ထည်သံသရာအချိန် minimize.လေးလံသောစုပ်စက်သည်ဆိုးဆေးများကိုအလွန်မြင့်မားသော pump pump ဖြင့်ပို့ပေးသည်. နှစ် ဦး စလုံးလက်စွဲစာအုပ်&အော်တိုနို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်,အလိုအလျောက်နှိုးဆော်,dilution&သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတွင်းဆိုးဆေးများသို့မဟုတ်ဓာတုပစ္စည်းများအားအစာကျွေးခြင်း,တဖြည်းဖြည်းသို့မဟုတ် degressively. အထူးလျှံလန်းလန်းလန်းလန်းလန်းစနစ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအဝတ်လျှော်မှုနှင့်ရေသုံးစွဲမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေသည်,အဝတ်လျှော်အချိန်ကိုလည်းလျှော့ချ. အပြည့်အဝလျှံ nozzle ဖြင့်တပ်ဆင်ထားခြင်းကြောင့်ဆေးကြောခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းနှင့်တင်းမာမှုနည်းပါးခြင်းစသည်တို့သည် lycra အထည်များ၏အကောင်းဆုံး elasticity ကိုရရှိသည်။. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ